Munamato wekutakura wakatsetseka. ? Iva nehurukuro yakanaka
Munamato wekutumira pasina zvinonetsa Ivo vanogona kutibatsira nguva dzese uye nekunakisa kwakanaka. Zvinogona kutibatsira kuti titore nguva yakaoma iyi sekuunza hupenyu pasirese.
Kunyangwe zvingaratidzika kunge zvisina kufanana uye vamwe vanhu vachiona chiitiko ichi zvakasununguka, chokwadi ndechekuti mamiriro akaomarara ayo amai nemwana vasati vazvarwa vanogara vari munjodzi. Kugona kukumbira kuburitswa kunounza kunogona kuunza kuvimba nerunyararo kuna amai.
Mukuwedzera, uyu munamato inyaradzo yekudzikama kwenhengo dzemhuri nekuti iwe unozviziva izvo minamato ine simba uye kuti kuberekwa hachisi chinhu chakareruka, saka nhengo yemhuri inovanda mumunamato inogona kuwana rugare nerunyararo inopa chivimbo chekuziva kuti Mwari pachake anotarisira hupenyu hwese panguva iyoyo.
1 Munamato wekutaurisa zvisiri nyore Chii chinangwa cheminamato iyi?
2 1) Munamato wekutumira pasina zvinonetsa
3 2) Munamato kuna Saint Ramon Nonato wekuzvara mwana (kuberekwa kwakanaka)
4 3) Munamato wevakadzi vane nhumbu wave kuda kubereka
5 4) Munamato usati waendesa (enda zvakanaka)
Munamato wekutaurisa zvisiri nyore Chii chinangwa cheminamato iyi?
Chinangwa chekuita munamato uyu kuti uve nekuzvarwa kwakanaka kunyanya ndechekuti vese amai nemwana vari munzira vanogona kupora, kuve kuberekwa hakuna matambudziko uye zvese zvinokurumidza.
Munamato uyu unogona kutangiswa pakutanga kwepamuviri sezvo zvichishumawo rugare nerunyararo kumhuri yese. Kuenda mukushanda pamwe nepfungwa dzako kana moyo uzere neshungu kune njodzi zvakanyanya uye ndosaka uyu munamato wakakosha.
1) Munamato wekutumira pasina zvinonetsa
«Maria, amai vane rudo rwakanaka, Musikana akanaka kubva kuNazareta, Iwe wakazivisa hukuru hwaIshe uye, uchiti" hongu ", wakazviita amai veMuponesi wedu naamai vedu: Teerera nhasi minamato yandinoita kwauri:
(Ita chikumbiro chako)
Mukati mandiri hupenyu hutsva huri kukura: diki iyo ichaunza mufaro uye mufaro, kunetseka uye kutya, tariro, mufaro kuimba yangu. Ive nehanya uye uichengetedze, Pandinenge ndichiitakura pachipfuva changu.
Mukadzi Wedu weSweet Mirira, uvape rudo rwako uye ushingi. Ameni.
Iwe unofanirwa trust trust zvekutumira pasina matambudziko.
Kushushikana pakubata kwakazara mukana wekuti amai vese vaziviswe.
Pinda maitiro aya kubva paruoko rwaIshe Mwari vese vane simba, uine chivimbo kuti munyengetero une simba uye kuti Mwari pachavo neMhandara Yakaropafadzwa Maria vanozotarisira hupenyu hwese muchirongwa ichi.
Izvo zvinodikanwa kuti udzikame uye uve nemoyo murefu kumirira kuti zvese zviuye mukubudirira. Mwari vane masimba uye kwaari hakuna angagone, anogara achida kutiteerera nekutibatsira nguva dzese.
2) Munamato kuna Saint Ramon Nonato wekuzvara mwana (kuberekwa kwakanaka)
«Ah wakakwidziridzwa patron, Saint Ramon, modhi yerudo kune varombo nevanoshaya, pano unondigombedzera nekuzvininipisa pamberi petsoka dzako kukumbira rubatsiro rwako pane zvandinoda.
Sezvo yaive mufaro wako mukuru kubatsira varombo nevanoshaya pasi pano, ndibatsireiwo, ndinokukumbira, iwe, unokudzwa, Saint Ramon, mune kutambudzika kwangu.
Kunemi, mudziviriri anokudzwa ndinouya kuzorumbidza mwanakomana wandinotakura pachipfuva changu.
Ndichengetedze ini nemwana kubva kune yangu guts ikozvino uye panguva yekutevera kunotevera.
Ini ndinokuvimbisa kuti uchamudzidzisa zvinoenderana nemirairo nemirairo yaMwari.
Teerera kuminamato yangu, mudiwa wangu ane rudo, San Ramón, uye ndiitei amai vanofara vemwanakomana uyu uyo ​​wandinovimba kubereka kuburikidza nekureverera kwako kune simba.
San Ramón Nonato anozivikanwa semutsvene wevakadzi vane pamuviri. Iye anova munorevereri wezvikonzero zvakaoma nekuti muhupenyu hwake aifanira kupfuura nemamiriro mazhinji akaoma kukunda ivo vese uye achigara achishandira Ishe. Kuparidzira evhangeri uye kubatsira vanoshayiwa ndechimwe chinhu chaiwanzova chimiro chake. Nanhasi anoramba ari mubatsiri akatendeka munguva dzino mune kusagadzikana uye kutya kwakawanda.
3) Munamato wevakadzi vane nhumbu wave kuda kubereka
«Mhandara Maria, ikozvino zvandichave kuve Mai sezvawaive iwe, ndipe moyo wakafanana newako, wakasimba murudo rwayo uye usingazununguki mukuvimbika kwayo. Mwoyo une rudo unoburitsa hunyoro uye haurambe kuzvipa kune vamwe.
Mwoyo ... unoderera unokwanisa kuisa rudo mune zvidiki zvidimbu uye vanozvininipisa masevhisi. Mwoyo wakachena usingaonekwe nekuputika, wakasvinura, unowanirwa nemufaro wevamwe. Mwoyo unotapira uye wakanaka usingashori chero munhu uye haambove matairi ekuregerera uye erudo.
Ah Mwari, makaratidza rudo kumuranda wenyu Saint Ramon Nonato, muchimuunza kuhupenyu nenzira inoshamisa uye mukamuita iye somuziviriri weedu vanozova vanaamai; nourongwa hwako uye nekureverera ndinokumbira iwe kuti hupenyu hutsva hwawakakura mandiri uuye nemufaro kuwedzera huwandu hwevana vako.
Kuna Kristu Tenzi wedu.
Munamato wevakadzi vane pamuviri nezvekuzvara une simba rakakura.
Kana mukadzi ave nepamuviri, iyo nguva yekuzvara, kunyangwe yakarongwa, inogona kupedzisira yashamisa mhuri yese uye ndosaka tichifanira kugara tichifunga munamato uyu wakakosha wenguva yekuzvara.
Kuna amai ndizvo chikonzero chekuvimba uye kugadzikana kune mutsara unogona kudzokororwa Munguva yekuzvarwa kana mhuri inogona kunge iri kuita iyi minamato ivo vachimirira.
Tinogona kukumbira kuti kutumirwa kuve nekukurumidza, kuti hazvirwadze kuti zvese zvinofamba zvakanaka uye zvikumbiro zvisingaperi zvichave zvichienderana nezvinodiwa nemunhu wega asi nekutenda kukuru kuti mhinduro ichauya.
4) Munamato usati waendesa (enda zvakanaka)
«Ishe, Baba Samasimba! Mhuri ndiyo yekare sisitimu yevanhu, ndeyekare seye murume iyeye.
Asi, nekuti ichi chiitiko chako pachako uye nzira chete dzinogona kuuya munhu pano nyika uye kukudziridza kuzere kuzere, masimba ezvakaipa ari kurwisa, zvichiita kuti varume vazvidze ichi chakakosha chikamu chebudiriro. Mukristu
Mukutsamwa kwavo kwekuda kuzviuraya vanoedza kurova mweya wekuuraya kumhuri. Tibvumire kuti tibudirire mune iro rima basa, Tenzi, mune izvo zvigadzirwa zvinoparadza pamhuri yeChristu.
Kuburikidza nekureverera kunokudzwa kwemuranda wako Saint Ramon Nonato, gweta rekudzivirira kudenga nekuda kwemufaro, kugara zvakanaka uye rugare rwemhuri dzechiKristu, tinokukumbira kuti uterere minyengetero yedu.
Nehunhu hwemutsvene uyu mukuru, mutungamiriri wedu, tipeiwo kuti dzimba dzinogara dzichifanirwa kuteedzerwa Mhuri Tsvene yeNazareta.
Usarege muvengi wehupenyu hwemhuri yeChristu akunde mukurwiswa kwavo kwekunyomba, asi panzvimbo pezvo, vadzorese kune chokwadi chembiri yezita renyu dzvene.
Nyika Zvemweya ichokwadi icho chatinofanira kuziva nguva dzose. Kugadzirira zvese zvenguva yekusununguka kunosanganisirawo hupenyu hwedu hwepamweya nekuti ndipo panogara manzwiro kana manzwiro anogona kutiita kuti tinzwe takaipa kana kupererwa pakati pekanguva sekakaoma, kane njodzi uye chishamiso sekuzvarwa kweupenyu hutsva.
Tisati tazvara tinogona kuita minamato nemhuri, nevabereki vemwana uye neshamwari dzinonzwa kuda kujoina munamato unogona kuita mutsauko pakati pekuzvarwa. Minamato ine simba kana ikaitwa nekutenda uye kubva pamoyo uye hapana mumwe munyengetero wepamwoyo kupfuura iwo wababa kana amai vevana vavo.
Gara uine kutenda muna munamato wekubvunza uye kuve nehurukuro yakanaka pasina zvinonetsa.